श्रीमतीलाई डिभोर्स दिएर आफ्नै छोरीसँग विहे गरेपछि भयो यस्तो हालत « Sajha Page
श्रीमतीलाई डिभोर्स दिएर आफ्नै छोरीसँग विहे गरेपछि भयो यस्तो हालत
प्रकाशित मिति: April 16, 2018
एउटा बाबुका लागि आफूले जन्म दिएको सन्तान प्राण भन्दा प्यारो हुन्छ । छोरीका लागि आफ्नो बाबु अभिभावक मात्र नभई भगवान सरह हुन्छन् । यस्तै बाबुका लागि छोरी घरकी लक्ष्मी जस्तै मानिन्छ । नेपाली समाजमा बाबु–छोरीको सम्बन्ध पवित्र मानिन्छ । तर, अमेरिकामा एउटा यस्तो घटना बाहिरिएको छ, जुन सुन्दा पनि सबैको होश हवास उठ्छ ।
अमेरिकाका एक बाबुले घरकी श्रीमतीलाई डिभोर्स दिएर आफ्नै छोरीलाई विहे गरेका छन् । अमेरिकाको कनेक्टिकटस्थित न्यू मिलफोर्ड टाउनमा स्टीवन प्लाडले आफ्नी श्रीमतीलाई तब डिभोर्स दिए जब उनकी १९ वर्षे छोरी (केटी नाम गरेकी) गर्भवती थिइन् ।
श्रीमती हुुँदाहुँदै छोरीसँग अवैध सम्बन्ध राखेका स्टिवनले गर्भवती भएपछि श्रीमतीलाई डिभोर्स दिए र छोरी केटीसँग विहे गरी वैधानिक रुपमै श्रीमती बनाए । श्रीमती नहुुँदा उनी छोरीलाई श्रीमतीकै रुपमा हेर्थे र सम्बन्ध राख्दै आएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार विहेपछि छोरी अर्थात नयाँ श्रीमती केटीले बच्चा जन्माएकी छन् । बच्चा जन्माएको ७ महिनासम्म सम्बन्ध ठिकै चल्दै थियो । तर, फेरि अर्को समस्या देखियो ।
छोरी अर्थात नयाँ श्रीमती केटीले उनलाई छोडेर अर्कै पुरुषसँग हिंडिन् । आफूूलाई छाडेपछि तनावमा परेका स्टिवनले केटी, बच्चा र शरण दिने पुरुषको घरमा घुुसेर गोली हानी हत्या गरे । त्यसपछि आफैलाई गोली हानेर आत्महत्या गरे ।
प्रहरीले केटी र पुुरुषको शव पिकअप ट्रकमा फेला पारी बरामद गरेको छ भने बच्चाको शव घरभित्र भेटाएको छ । प्रहरी अनुसन्धानमा स्टिवन र केटी अवैध सम्बन्ध राखेको आरोपमा यसअघि पनि पक्राउ परिसकेका थिए ।
केटीकी आमाको उजुरीका आधारमा उनीहरु पक्राउ परेका थिए । तर, दुबैको मन मिलेपछि कस्को के लाग्थ्यो र प्रहरीले छोडिदियो । त्यसपछि स्टिवनले श्रीमतीलाई डिभोर्स दिएर छोरीसँग औपचारिक सम्बन्ध गाँसेका थिए । एजेन्सी
रबिलाई समर्थन गर्ने भीडबाट निस्कीयो आवाज, रबिलाई हिरासतमै इन्काउन्टर हुन्छ (भिडियो)
रबि–सालिकराम प्रकरण ः रविको पक्षमा पोखरामा चर्काचर्की, गृहमन्त्रीको राजिनामा माग (भिडियो)
तामाको औठी लगाउदा हुनेछ यी ८ चमत्कारीक फाइदाहरु, कुन औलामा लगाउने? जान्नुहोस
यसरी थाहा पाउने योनीको क्यान्सर, क्यान्सर हुने कारण यस्ता छन् (भिडियो हेर्नुहोस)
मिस्टर एण्ड मिस इलाईट २०१९ हुने
विश्वमा सबै भन्दा लामो लिङ्ग भएका पुरुष हेर्नुहोस यस्ता छन् ! कत्रो छ त उनको लिङ्ग
योनीबाट सेतो पानी किन बग्छ ? सेतो पानी बग्ने समस्याबाट बच्नेहरु उपायहरु
मन्दिरको हरेक टुडालमा किन कुदिन्छ अस्लिल यौनजन्य कला ? यस्तो छ रहस्य - सबैको कौतुहलताको जवाफ पढ्नुहोस (फोटो/भिडियो सहित)
फेरी अर्का नेपाली ओछ्यान मै मृत फेला, उनि नेपाल आउन केहि दिन मात्र बाकी थियो
‘बले’ र ‘कक्रोज’ले बनाए दमदारको म्युजिक भिडियो (भिडियो सहित)